Hlola iGuadalajara, Mexico - World Tourism Portal
Hlola iGuadalajara, eMexico
Yini ukubona. Izindawo zokudlela ezihamba phambili ezihamba phambili eGuadalajara Mexico
Ongakwenza eGuadalajara, Mexico
Iwebhusayithi esemthethweni yezokuvakasha yeGuadalajara
Bukela ividiyo ngeGuadalajara
Hlola iGuadalajara, inhloko-dolobha yesifundazwe maphakathi neJalisco ku Mexico. Futhi kungumuzi wesibili ngobukhulu ezweni futhi kubhekwa njengedolobha lamakoloni, yize iningi lezinsuku zalo zokwakha lisuka esikhathini senkululeko. Naphezu kokuba nokuzizwa uphumule kakhulu kunoku Mexico City isikhungo singabonakala sithambile futhi sinothuli, ikakhulukazi ngesikhathi sehora lapho ilanga seliphumile. Noma kunjalo, kuseyidolobha elihle futhi liqukethe izindawo eziningi ezinhle zokuhamba, hhayi nje enkabeni yedolobha.
IGuadalajara inesimo sezulu esomile esiswakeme, esivamile maphakathi neMexico, kanye noshintsho olunamandla lwesizini kwezulu.
Abasunguli beGuadalajara kwakunguDoña Beatriz de Hernandez noMbusi uCristobal de Oñate. EPlaza de los Fundadores kunesikhumbuzo sesikhumbuzo sobabili.
UGuadalajara noJalisco bebonke babe yisikhungo seCristero Wars (1926-1929), okuwukuhlubuka okwenziwa ngabaholi bamKatolika ngokumelene nezinguquko zokuguqula ubumongameli bukaPlutarco Calles. Enye yezingxabano zokuqala zokuhlubuka ezahlaselwa eGdalajara eSontweni likaMame Wethu Guadalupe (I-3 Agasti 1926), lapho iqembu lamakhulu ayisikhisimusi libandakanyeka ekuhlaseleni ngamasosha kahulumeni. IGuadalajara uqobo yahlaselwa (yangaphumelela) amabutho eCristero ngoMashi we1929.
IGuadalajara ingenye yezindawo ezikhula ngokushesha kakhulu kuleli dolobha. Lokhu kukhula kuqhutshwe ngokwengxenye imboni ye-elekthronikhi eyandayo emaphethelweni edolobha. Eminye imboni ebalulekile futhi ekhulayo izimboni zemithi, ukucubungula ukudla, nemfashini.
Inyuvesi yaseGuadalajara, evame ukubizwa ngokuthi “U de G” (“OOO day HAY”) iyisikhungo esibaluleke kakhulu semfundo ephakeme yaseMexico, neMexico yesibili ebaluleke kakhulu ngemuva Mexico City'mamam UNAM. Inyuvesi futhi isebenza njengesikhungo semisebenzi yamasiko ejatshulelwa abahlali kanye nezivakashi ngokufana neBallet Folclórico neCineforo Universidad.
Ukusungulwa kweGuadalajara kugujwa ngoFebhuwari 14 ngoba yasungulwa nge-14 ngoFebhuwari 1542.
USuku lweMariachi lugujwa ngesonto lokuqala likaSepthemba. Umbuthano kaMariachis ovela kulo lonke elaseMexico ngisho nezingxenye ezithile zomhlaba ubuthana eGuadalajara imvamisa eTeatro Degollado nasendaweni ezungezile ukuzodlala. Kuhlukile kakhulu futhi ngeke uze ufakaze into efana nalena kwenye indawo.
URomería de la Virgen de Zapopan ugujwa eGuadalajara ngo-12 ngo-Okthoba ukuhlonipha isibalo sendawo yaseGuadalajara yendawo kaMariya kaMariya, iLagengen de Zapopan. Kulolu suku bangaphezu kwesigidi abantu ababhidliza lesi sithombe esidumile besuka enkosini yedolobha besiya ekhaya kubo e-Basilica of Our Lady of Zapopan. Lolu suku lugujwa kuphela endaweni yaseGuadalajara, futhi ngesinye sezibonelo ezinkulu zeRomería ngaphandle ESpain.
Bheka i-Bullfight, iPlaza de Toros (indandatho yeBull) itholakala ngaphesheya komgwaqo ukusuka e-Estadio Jalisco eCalzada Independent. Ama-Bullfights ayenzeka njalo ngeSonto ngo-4.30pm kusuka ngoSepthemba kuya kuFebhuwari.
I-Feria Internacional del Libro (i-International Book Fair, eyaziwa ngabasunguli bayo baseSpain ngokuthi yi- 'la FIL') kwenzeka njalo ngoNovemba eGuadalajara. Izinkampani kanye nabathunywa beza emhlabeni wonke jikelele ukukhombisa izincwadi zabo futhi babone nezincwadi ezivela kwezinye izindawo. Minyaka yonke izwe noma isifunda siyamenywa ukuba sethule izincwadi zaso.
I-festival Internacional de Cine (International Cinema festival, minyaka yonke ngo-Okthoba. Ifaka ama-movie ahlukene futhi isebenza njalo ngonyaka ngaphansi kwesihloko esihlukile. Ama-movie ajwayele ukukhonjiswa eCineforo futhi ukungena kumahhala.
I-Grito de Independentencia (i-Independent Yell) Usuku lokuzimela lwendabuko 'grito' noma 'yell'. Abantu bendawo baya esigcawini esikhulu futhi bebonke bamemeze lapho iwashi ligasele phakathi kwamabili. Imvamisa abantu bamemeza i-'Viva 'bese bethi' México 'noma igama lomuntu obalulekile waseMexico, ngokwesibonelo u-'Viva Hidalgo', njll.
I-Las Posadas (The Inns) Umkhuba kaKhisimusi wendabuko waseMexico, iphinda ibuye idlule kuJosefa noMariya bedlula eBethlehem, icela indawo yokuhlala futhi yenqatshwa. Ngokuvamile kulezi zinsuku lokhu kungumkhosi womndeni nabangane, kepha uma wazi owaseMexico, kuyindlela enhle yokuthola isiko laseMexico lokuqala. Ukuvela njalo kufaka phakathi i-Piñatas, amabhendi eMariachi, ubhiya waseMexico, iTequila kanye nokuhamba okuningi.
Ama-Tianguis (Izimakethe Zasemgwaqweni), Indawo yaseMexico ejwayelekile yokuthenga izimpahla futhi eshibhile kunezinye izindawo. Kukhona inombolo yabo eGuadalajara.
I-Tianguis el Baratillo, iHuge tianguis ehlangana ngasenyakatho-mpumalanga yalesi sikhungo, iqukethe konke kusuka ku-elekthronikhi kuya ezinsizeni ezindala kuya emathoyweni ezinja kuya ezilwaneni kuya kumaDVD nezinye izinto eziningi ezingaphansi.
UTianguis Chapultepec ugijimela nsuku zonke phakathi kwamabili kuya kusihlwa eboulevard maphakathi ne-Avenida Chapultepec eColonia Americaana. Kanye nezinto eziningi ongazithenga, uzojabulisa abaculi abaningi, abadansi nabaculi. NgoLwesihlanu nangoMgqibelo ubusuku bematasa kakhulu ngezinketho eziningi eziningi zokuthenga nokuzijabulisa.
I-Tianguis Cultural, Njalo ngoMgqibelo kusuka ku-10: 30am to 4: 00pm ePlaza Benito Juarez, ngokushesha i-SW yaseParque Agua Azul ekhoneni le16 de Septiembre ne-Av Washington. Amakhonsathi wamahhala, i-air chess evulekile, abaculi abasemsebenzini kanye nemakethe evulekile yomoya badonsela isixuku kulo mkhosi wamasonto onke wesiko elihlukile.
UMercado Libertad, owaziwa emhlabeni wonke njengeMercado San Juan de Dios. Enye i-tianguis enkulu, enhle yokuqoqa izikhumbuzo, nayo inendwangu, ukudla, izingubo nezingubo zendabuko.
IPlaza Galerías, inxanxathela yezitolo ezinkulu zaseGuadalajara, etholakala lapho kuwela khona iVallarta neRafael Sanzio. Ifaka i-cinema enkulu kakhulu yeGuadalajara, enamakamelo we-20 THX kanye namagumbi we-4 VIP. Inezindawo zokupaka ezinemicimbi eminingi kanye nekhilomitha engaphezu kwesikwele i-1 yesikhala esivulekile sokupaka esabiwe ne-Wal-Mart ne-Sam's Club.
IPlaza Andares, inxanxathela yezitolo entsha yaseGuadalajara, etholakala ngokuwela iPatria Avenue nePuerta de Hierro. Iyakha izitolo ezifana ne-DKNY, Cartier, Hugo Boss, Mont Blanc, Helmut Lang, Fendi, Alexander McQueen, uVesace, u-Armani, uLouis Vuitton, uHermes, uValentino, uDiesel, uCavalli, uCalvin Klein, isiteshi kanye neDior phakathi kwabanye.
IPlaza del Sol, etholakala eduzane nokuwela phakathi kweLópez Mateos neMariano Otero avenues. Isakhiwo esikhulu sesibili esikhulu seGuadalajara, sinepaki yezimoto eneziteji eziningi nendawo evulekile, enezikhala ezinkulu ezivulekile phakathi, ezizungezwe yimigwaqo emikhulu. ITorrena Tower, elinganisa i-336.5 m, isakhiwa eduze nePlaza del Sol, futhi eduze nePlaza Torrena, inxanxathela encane, engaphansi komhlaba engabonakala ngodonga lwayo ukhonkolo omhlophe osendaweni yokuwela iLewpez Mateos neMarkano Otero.
IPlaza Patria, eboshwe yiPatria, i-Ávila Camacho ne-Américas avenues. Yindawo enezitolo ezimbili, hhayi enkulu njengePlaza del Sol noma ezinye izitolo ezinkulu, kodwa ngobukhulu obukhulu bezitolo, kufaka phakathi imfashini, izinto zobuchwepheshe, izitolo ezilula nezitolo ezinkulu.
ICentro Magno, etholakala phakathi kweVallarta neLópez Cotilla avenues. Inesikhala esikhulu, esibanzi, esivaliwe phakathi, sizungezwe kakhulu yizindawo zokudlela, imfashini, izitolo zikagesi kanye ne-bazaar, ene-cinema esitezi esiphezulu.
ISifunda saseTlaquepaque's Old Town District sibonisa okunezinhlobonhlobo ezinkulu zobuciko nezobuciko baseMexico kanye nempahla yasendlini yokuhlobisa yendabuko nelesimanjemanje. Zonke izimfanelo zomkhiqizo ezisukela kubumba obukhulu kunabo bonke, ingilazi, umpheki, njll., Ekubumbeni kwendabuko okwenziwe ngabakwaMasters abakhulu baseMexico kuyabonakala futhi kuyathengiswa. I-Tlaquepaque ikhethwa ngabaninikhaya abaningi nabahlobisi ukuba banikeze futhi bahlobise amakhaya abo, izindawo zokudlela noma amahhotela.
IPlaza Mexico itholakala emabhulokini ayisikhombisa ngasentshonalanga kwePlaza Galería del Calzado. Av. IMéxico 3300, iyindawo yokuthenga endala enikeza ngezitolo ze120. Noma kunjalo abathengisi abaningi bayahamba. Kuvulwa nsuku zonke kusuka ku-10-8.
IGaleria del Calzado etholakala Av. I-México Av. I-3225 iyindawo yonke yezitolo equkethe izitolo zezicathulo ezingaphezu kuka-60. Lesi isitolo esihle sawo wonke umuntu oxakekile futhi ozinikele ngokuthenga izicathulo. Amanani nezitayela ziyehluka. Isitolo sivulwa kusuka ngoMsombuluko kuze kube uMgqibelo sisuka ku-11 am siye ku-9 pm bese kuthi ngeSonto siphume i-11 am siye e-8: 30 pm
I-Birria, i-tortas ahogadas, kanye nama-chillaquiles ezinye zezitsha zendabuko eGuadalajara. Inkantolo yokudla eMercado Libertad iyindawo enhle yokuhluza amakhono ahlukahlukene endawo.
IBirria Birria iyisitshulu esenziwe ngophaka esenziwe ngopelepele, izinongo kanye nembuzi ngokwesiko, yize kunjalo uvame ukunikezwa ezinye izinketho zenyama ezinjenge-mutton noma inyama yenkomo ngokuya ngendawo yokudlela. EBirria, izindawo zokudlela ezisendaweni yaseNueve Esquinas (amabhlokhi ambalwa iNingizimu yeTemplo San Francisco) ithandwa kakhulu (futhi muhle impela).
Ama-Tortas ahogadas lawa axhwalela isinkwa se-bolillo esimiswe kusawoti we-chile nosawoti kasawoti. Izindawo zokudlela eziningi eCentro Historico zigxile kulezi.
I-Pozole Isobho esijabulisayo sengulube ne-Hominy eboshwe ngeklabishi entsha, isithombo, u-anyanisi ne-cilantro. Kukhona ezinye izimbongi ezinhle kakhulu zenkantolo enkantolo yezokudla yaseMercado Libertad.
UMollete ungukudla esidlweni sasekuseni esidumile. Isitayela sesiFulentshi sihlukaniswa futhi simbozwe ubhontshisi obilisiwe bese sinamathiselwa nge-ham noma nge-chorizo ​​noshizi futhi sixoxwe ngotshani.
Ama-Tamales aqukethe inhlanganisela yama-masa eyenziwe nge-maseca okuyinhlama eyenziwe ngumbila futhi kuyo iqukethe imol ebomvu noma i-salsa eluhlaza nokukhetha inkukhu noma ingulube. Iningi labantu lenza ama-tamales ngamaholide anjengoKhisimusi, uSuku lwabafileyo, uSuku lokuzimela lwaseMexico, noma uNyaka Omusha.
Ama-Enchiladas yi-cornilla noma ufulawa we-breakilla ogoqwa futhi ugcwele inyama, ushizi, imifino kanye / noma amazambane futhi umbozwe nge-chili pepper sauce. Ngaphezulu kwe-enchiladas ingahle ibe no-ukhilimu omuncu noshizi ngokuya ngalokho ongakuthanda kukho.
Uma uphuthelwa ukudla okusheshayo kwaseMelika, khona-ke usenhlanhleni. IGuadalajara inezitolo ze14 McDonald.
Izinhlobo ezahlukene zemigoqo zilula ukuthola. Kunezindawo eziningi ezigxile ebusheni, kanye nezinye, eduze naseTeatro Degollado (Opera House). Indawo enhle. Indawo yaseMelika futhi inezindawo eziningi zamabha. Enye indawo iyisikhungo seZapopan, ngabe unemishayo ecishe ibe yi-12 eduze komunye nomunye. Sesha ibha ngeqoqo elikhulu leTequilas bese unambitha i-blanca yamafutha, reposada ne-añejo. Uma ucela i-tequila kusuka kuLos Altos okuyisiko, ngokuqinisekile uzothola okuthile okuhle. ILos Altos yisifunda i-NE se-GDL lapho kwenziwa khona i-tequila enhle kakhulu futhi siveza izithombe zesiko, ukuthanda izwe nokuthanda umuntu ngamunye.
Ungalokothi uphathe izinto ezingekho emthethweni nawe; Amaphoyisa aseMexico aqinile kakhulu mayelana nalawa macala.
Hlola iGuadalajaha, Mexico kanye namadolobhana aseduze
Tequila - enhle isipiliyoni sokunambitha tequila. Shayela noma uthathe ibhasi. Uhambo lumayelana nama-1.5 hrs indlela ngayinye. Kuhle emaphandleni. Kuhambo olungenakulibaleka lwempelasonto, thatha i-Tequila Express - yisimo esimnandi sokudutshulwa kwe-tequila kanye ne-riking ye-mariachis ekukukhonkotha yonke indlela eya eTequila. Isitimela sihamba ekuseni nangoMsombuluko ekuseni e10am sisuka esiteshini sesitimela iGuadalajara, sibuya kusihlwa esifanayo. IJose Cuervo distillery inohambo oluhlanganisiwe oluzokuthatha ehhotela lakho, likuyise epulazini le-agave, bese lisiya e-distillery, likukhombise i-distillery, likunikeze amasampula, likuse e-galleria yabo futhi linikeze i-margarita yamahhala ne-10% esitolo sokudlela Idolobha lincane futhi lifanele ukuqashelwa.
ILake Chapala, indawo eyiholide yesifunda enkulu enamadolobha amahle njengeChapala ne-Ajijic (eyokugcina enomphakathi omkhulu we-gringo expat).
IGuachimontones iyindawo eyakha izakhi zasendulo (300 BCE - 900 CE) eduze kwedolobha laseTeuchitlán cishe ihora elingasentshonalanga neGuadalajara eyaziwa ngephiramidi yayo eyingqayizivele eyindilinga. Le nkimbinkimbi ye-100-plus acre yatholakala kuphela kuma-1970s.
IMazamitla, idolobha elihle eLos Altos eningizimu yeLake Chapala.
ITapalpa idolobha elihle elisentabeni eduze kweCd Guzman, ihlinzeka ngamahhotela nekhabana njengamagumbi okubuya okuhle ngempelasonto
ISan Juan de los Lagos, indawo yesibili evakashelwa kakhulu abahambi lapho Mexico ngemuva kweLa Basilica de Guadalupe eMexico City.
Izindawo ezikude zihlanganisa iPuerto Vallarta, iBolañas (umphakathi wama-huichol wendabuko), iZacatecas, Aguascalientes neColima.